गर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ? र बच्चा गोरो हुन्छ…? जानी राखौ.. – Dainik Samchar
गर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ? र बच्चा गोरो हुन्छ…? जानी राखौ..
August 19, 2021 267
हामी सानै हुँदा अनि देखि त्यस्ता धेरै धेरै भनाइ वा उखान सुन्दै आएका हुन्छौं। कतिले हामीलाई बिस्वासमा पार्छन् भने कति बेकारका लाग्छन्।
तर कतिपय यस्ता पुराना भनाइहरु बिज्ञानले पनि सत्य हुन्छ भनेर साबित गरेको छ। हामीले सुन्दै आएका कुराहरु जस्तै:खुर्सानि ओसिएमा पानी पर्छ,भ्यागुति चलाए छाला चिलाउंछ, गर्भवति हुंदा टन्न केरा खए छोरा हुन्छ,दुध धेरै खाएमा बच्चा गोरो जन्मिन्छ आदि र अन्य धेरै। यस्ता भनाइहरु केहिमा सत्यता नभए पनि केहि भने सत्य हुने बिज्ञानले पनि मानेको छ।
के गर्भवति हुँदा टन्न केरा खाए छोरा नै हुन्छ त? अक्स्फोर्ड बिस्वबिध्यालयका बिद्वानहरुले बर्षौंदेखि मानिदै आएको अन्धबिस्वासलाई तोड्ने नियतले एक समुह बनाई अध्ययन गरेका थिए र नतिजामा उनिहरुले के पाए भने अधिकांस अब्सथामा धेरै केरा खाँदा छोरा नै हुन्छ।
यसको लागि उनिहरुले ७४० गर्भवति महिलाहरुलाई सहव्हागि गराएका थिए। सहभाइहरु मध्ये जसले धेरै क्यालोरि युक्त खाना वा केरा खाएका थिए उनिहरुको छोरा भएको थियो भने थोरै क्यालोरियुक्त खाना खने र थोरै केरा खानेको छोरि भएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरु के बिस्वास गर्छन् भने केरामा पोटासियमको मात्र धेरै हुन्छ ।
जसले लिङ्गको लम्बाइ बढाउन मदत गर्छ। तर उनिहरु यो पनि बिस्वास गर्छन् कि केरा खाअँदा छोरा हुने सम्भावना केबल ५५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। सम्भावना बढि हुने बहेकोले नै गर्दा हुन सक्छ अनतदेखि यो भनाइ भनिदै आएको छ।
त्यस्तै यदि महिला गर्भवति हुँदा छतिमा बढि पोल्छ भने रौं धेरै भएको बच्चा जन्मने कुरा पनि बैज्ञानिक रुपमा सिद्ध भैसकेको छ।
Prevगर्भनिरोधक औषधी खाँदा महिलाको तौल बढ्छ ? यसाे भन्छन् चिकित्सक
Nextआजको राशिफल : वि.सं.२०७८ साल भदौ ०४ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट २० तारिख ।
अभियान्ता हरि उदासीको साइली श्रीमती बताउने महिला दुई छोराहरुसंगै रुदै मिडियामा आएपछी हरि उदासी पनि आए मिडियामा, के हो त वास्तविकता (भिडियो)
रबि लामिछाने न्यूज २४ छोडेपछि खाए आमाको क’सम ! औला उठाउनु परे जहाँ भेटिनछु त्यहि ढुंङ्गाले हान्नुस(भिडियो)